ကြက်ဟင်းခါးသီး ကို ဘယ်လို စားသင့်သလဲ... ? by popolay.com
ကြက်ဟင်းခါးသီး ကို ဘယ်လို စားသင့်သလဲ... ?
20 Nov 2020 1,060 Views
ကြက်ဟင်းခါးသီးသည် သွေးကို သန့်စင်ပြီး အရေပြားရောဂါ၊ အရေပြားပိုးဝင်ခြင်း၊ နှင်းခူနှင့် ယားနာ၊ မှိုစွဲသောရောဂါတွေကို ကုသရာတွင် အထောက်ကူပေးသည်။ ထို့အပြင် မျက်စိပြဿနာကို ကင်းဝေးစေပြီး အမြင်အာရုံ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ ကြက်ဟင်းခါးသီးသည် အရက်ကြောင့်ဖြစ်သော အသည်းရောဂါကို ကုသနိုင်ပြီး အသည်းကို သန့်စင်စေသည်။ ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်ကုသရာမှာ ကြက်ဟင်းခါးသီးကို အသုံးပြုကြသည်။ ထို့အပြင် ဆိုရီယေးဆစ်(စ်)ဟုခေါ်သော အရေပြားရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရောဂါခုခံအားရှိလားအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာရောင်ရမ်းမှုလျော့ကျစေသော အာနိသင်ရှိသဖြင့် လိပ်ခေါင်းရောဂါကို သက်သာစေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို လျှော့ချပေးပြီး အစာချေဖျက်နိုင်အောင် ကူညီပေးသည်။ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း (ANTIOXIDENT) များစွာပါသဖြင့် ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သော ဖရီးရယ်ဒီကယ်လ်တွေကို တွန်းလှန်ပေးသည်။ ကြက်ဟင်းခါးသီးသည် ခုခံအားကျဆင်းရောဂါ (HIV)၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့် ခုခံအားနည်းရောဂါတို့ကို ကာကွယ်ကုသရာမှာ များစွာအထောက်အကူပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ဒူးနာ၊ ခါးနာ၊ ခြေထောက်နာရောဂါများနှင့် လေရောဂါတို့ကိုပါ ကုသရာတွင် အစွမ်းရှိသည်။
ကြက်ဟင်းခါးသီးကိုစားလျှင် အကြောတက် တတ်သည်။ သို့ရာတွင် အစေ့ညှာတိုင်နှင့် အစေ့တွေကိုဖယ်ရှားပြီး အသားကိုစားလျှင် အကြောမတက်တော့ချေ။ ကြက်ဟင်းခါးသီးကိုများများစားလျှင် ကယ်လ်စီယံ စုပ်ယူမှုအားကို ထိခိုက်စေနိုင်သဖြင့် နေ့စဉ် သို့မဟုတ် မကြာမကြာ အသီး၏ ၄-ပုံ ၁-ပုံခန့်သာ စားသင့်သည်ဟုသိရသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ ကြက်ဟင်းခါးသီး ကိုများများစားလျှင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတတ်သည်။
ဆေးဘက်ဝင်စေဖို့ ကြက်ဟင်းခါးသီးကိုပါးပါးလှီးပြီး အစိမ်းအတိုင်း (မချက်ပြုတ်ဘဲ) စားသင့်သည်။ ကြော်လှော်စားချင်လျှင်တော့ နူးရုံသာ ချက်ပြုတ်သင့်သည်။ ကြက်ဟင်းခါးသီးနှင့် မတည့်သော အသီးအနှံများမှာ မှိုနှင့် ကြက်သားတို့ဖြစ်သည်။ အကြောတက်၊ အော့အန်တတ်သည်။